“आमाको गुनासो” – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By डिजिटल खबर Last updated Jan 10, 2020 71 0
मैले बार्ह बर्ष पढाउदा केहि परिवर्तन नभएको छोरा, बुहारीले एक रात पठाएर परिवर्तन गर्न सक्दि रैछिन् ।
छोरालाई बुहारीको पोइ नबनाउनुहोस, छोरा छोरा नै रहनुपर्छ ? बिवाह नहुन्जेल हर कुरामा साथ सपोर्ट दिइरहने छोरा बिवाह पछि फेरिन्छ रे, छोराको माया बिहाह नगरुन्जेल तँ हो ! भन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा प्राप्त मात्रमा भेट्न सकिन्छ ।
के बुहारी कसैको घर बर्बाद गर्न भित्रीएकी हुन त ? अनि हिजो बुहारी भएर घरमा भित्रिएपछि आफु आज सासु हुदै छु भन्ने कुरा भुलीहाल्न कहा पाईन्छ । त, महोदय ?
सन्तानबाट सबै आमा बुवालाई हाम्रो लागी केहि गर्ने उत्तराधिकारी छ । मेरो लागी केहि गर्छ । जव कि म बासको टुप्पो लुङ्गेझै लुग्नु पर्दैन समाजमा भन्ने किसीमको घमण्ड त हुन्छ नै । तर,
यो सोच हुदैन कि मैले म मेरो छोराको कस्तो खालको बुबा आमा भन्ने हो त ?
भोली मैले उ बाट के प्राप्त गर्नु छ भनेर चै सँस्कार दिनुपर्ने कुरा चै भुल्नुहुन्छ । कतिपय महाशयहरुले अनि भोली जे जस्तो कुरा अपदोष र गल्ती हुन्छ सब मेरो छोरा खत्तम हुनाल, वा।।।। बाबु, वा।।।। तपाईंको सपोट ।
भनिन्छ परिवार एउटा पाठषाला हो । आमा पहिलो शिक्षा हो ।
हो, यसकमा कुनै दुई मत नै, हुनै सक्दैन । रत, तपाईंले जस्तो शिक्षा प्रदान गर्नु भएको छ त्येस्तै नतिजा पाउनुहुन्छ नि होईन र ?
आपँ रोपेर सुन्तला खोज्नु कहासम्म बुद्धिमानी हुन्छ । आफै बिचार गर्नुहोस् ?
छोरा परिवर्तन त्येहीसम्म हुदैन जहिले सम्म बाबु आमाले आफु परिवर्तन भएको रुप झल्काउदैनन् । प्राय हाम्रो समाजमा यस्तो हुन्छ कि ?
जब, छोराको बिवा गरिन्छ । सुरु सुरुमा बुहारीलाई खुब लोलोपोत घस्ने काम हुन्छ, वरिपरि छिमेकीलाई नि हाम्री बुहारी यस्ती छिन, उस्ति छिन, सबै राम्रो, मेरो त छोरा नै राम्रो, सासुससुराको रिेमोटले चलुन्जेल सब हाम्रो त्येसपछी, जव बुहारी आफ्नो लागी आफै डिसिजन गर्न चाहान्छिन् र गर्छिन् अनि छोराले स्वास्नी छाडा गरायो ।
य, बुहारीले आफ्नो काम आफै गर्छु भनेर घरबाट निस्किदा उनि छाडा हुन्छिन त ? ती, बुहारी पनि तपाईंको घरमा भएकी छोरी जस्तै होइनन र ?
घरकालाई भन्दा परकालाई बढी चासो हुन्छ । अनेक प्रश्न;
तपाईको बुहारी कतिबेला उठ्छिन ?
कतिबेला सुत्छिन ?
घरधन्दा सबै गर्छिन ?
अनि अझै, तपाईंको खुट्टा मालिस गर्छिन कि नाई रे ?
बिचरा एब गरीब मानष्किताले आर्जित सम्मानीत छिमेकी ज्यु, बुहारीले के के लेराईन भनेर खोजिनीती गर्नु भन्दा बुहारीले जन्मघरमा के के छाडेर आईन भनेर सोच्नुहोस ?
हो बाबु आमाको रेखदेख गर्नु घरपरिवारमा आएका पाहुनालाई सम्मान गर्नु बुहारीको नि दाहित्व हो ।
तर यो होईन कि बुहारीलाई माया दिदा छोरीको माया कम होला जसरी सोच्नु गलत मानष्किता ।
एउटा घरमा छोराले आफ्नो श्रीमती छोराछोरी छोडेर रोजगारको खोजिमा खाडी मुलुक गएछन् । प्रदेशको ठाँउ भन्ने बित्तिकै काम नपाउदा प्रदेशमा नै आफ्नै साथीहरूले गरेको घृणा र अपमानले पिल्सिएको छोराले घर परिवारलाई खबर गर्ने कुनै माध्यम पाएनन् । आफ्ना मुटुको टुक्रा र आफ्नो जीबनसङ्गीनीलाई छोडेर आएकोमा धेरै पछुतो हुन थालेछ । त्येसको केहि समय पछि उसले एकजना साथीको सहयोगले काम पाएछ र घरमा फोन गरेछ ।
घरबाट गएको खबर यस्तो थियोे ।
बाबु त हराईस …. यँहा तेरो बुढीले के के गरी गरी ….
सुरुमै हामीले भनेको मान्दिन …. छोराछोरी पिट्छ, हाम्रो रिसले ….
जभोलि त्यो मास्टर बाबुसङ्ग नि खुब बोलचाल हुन्छ तेरो बुढीको, त नभएको दिन देखि हाम्रो ससारै अध्यारो भएको छ रे ।
के छोराको आधी हिस्सा बुहारी होईन र ?
अनि त्येही छोराको अ्श नातीनातीना होईन र ?
अनि उहाँहरुलाई जती छोरा बेखबर हुदा पिर छ, त्येतिनै पिडा बुहारीलाई आफ्नो श्रीमान बेखबर हुदा चै हुदैन र ?
अनी भोली तपाईंको कारणले छोराको घर बिग्रीयो भने तपाईंलाई तपाईंको छोराले कस्तो नजरले हेर्लान् त ?
हुन त सन्तानको घर बिगार्ने चाहाना बाबु आमाको हुदैन तर यस्तै यस्तै आफ्नो अधिनमा सबै कुरा रहनुपर्छ भन्ने घमण्डले के राम्रो नै होला त ?
सबै मानिस एकैनाशका नहुन सक्छ्न, तर, मैले मेरो समाजमा यस्तो पनि देखेकी ?
एउटा बुहारीलाई छोरी छोरी जन्माईन भनेर घर बाट एकदमै अपहेलित गरेको थियोे, दैव दशा उनलाई सानु छोरी जन्मेको चार महिना पछि ब्लड क्यान्सर भएछ ।
उनको परिवारमा उनी उनको श्रीमान छोरी दुवटा अनि नन्दहरु दुईजना र सासुससुरा थिए जव उनलाई त्यो रोग पत्ता लाग्यो तव सासुससुरा र नन्दहरु छुट्टीएर बसे । यती सम्म कि त्यो रोगको उपचारको क्रममा अचल सम्पत्ति सबै छोराले सक्छ रे भनेर अंश भाग लगाउदा पनि संगै रहेका छोरीहरुलाई नि बराबर गरे ।
छोरालाई बारम्बार सम्झाए । यो मर्छे, सम्पत्ती बेचेर यसलाई उपचार नगर, बरु अर्की खोजेर बिवाह गर्दिउला छोडदे यस्लाई भनेर, तर छोराले मानेन ।
आफ्नो भागमा आएको अलिकति अंश पनि बेचेर श्रीमतीको उपचार गरायो । छोराले अह, निको हुन सकेन, आफ्नो भन्ने मान्छे चिनजानका साथीहरू सबैले सहयोग गर्दा पनि उनलाई उपचार खर्च पुरा जुटाउन नसकेर श्रीमतीको चार महिना पछि मुत्र्यु भयो ।
कठैबरा एक त्यो आठ पुरा भएर नौ महिना लागेकी छोरी आमाको लाश नजिकै बसेर रोइरहेछे, त्येस्लाई दुध पिलाईदिने कोही छैन ? ६ बर्षकी अर्की छोरीलाई लाश उठाउन आउनेले दश रूपमा दिएर चक्लेट किन्न पठाए नाच्दै नाच्दै गै खुशी भएर पैसा पाएकोमा, त्यो निर्दोषलाई के थाहा आज मैले सन्सारकै अमुल्य चिज गुमाएकी छु भनेर ।
लाश उठाएर लगे तिनै दुइटा छोरी च्यापेर धुरुधुरु बौ रोयो । श्रीमती मरी दुनियाँको रिन बाँकी छ ।
तर बौ आमाले ठिकै भयो राम्रो भो अलि छिटो मरेकी भए त मेरो छोराको सम्पत्ति त जोगिन्थ्यो भन । तपाईं काखमा भएकी छोरी गुमाउनु पर्दा तपाईंलाई के हुन्थ्यो ? हो त्येही भएको छ आज बुहारीका आमा बौ लाई यो सोच्नुहोस ।
अनि तिनै अनगिन्ती पिडा धान्न नसकेर टुटेको छोराको मनले तपाईंलाई कतिको सपोर्ट र समर्थन गर्छ होला त ?
आफ्नो खुशीमा रमाउन पाउदैन र छोराले ?
अनु बुहारीलाई माया गर्दैमा आफ्ना छोरा पराई हुन्छ र ?
अनि आफ्नो छोरिलाई ज्वाईले माया नगर्दा चै यस्को को छ र त्यो घरमा रे आफ्नो घरमा चै छोराले बुहारीलाई माया नगरे बुहारीको नि को छ त यो घरमा भन्न किन सक्दैन तिनै बाबु आमाको मस्तिष्कले ।
तपाईंहरुले दश–बाहृ बर्ष पढाएको छोरा अह परिवर्तन हुदैन बुहारीले कयौं रात पठाए पनि यो त तपाईंहरुले परिवर्तन हुन बाध्य त बनाईराख्नु भएको त छैन कतै ???
परिवार भित्र परिवार छैन अहिले बुहारीले ससुरा काट्ने मार्ने काण्ड, जेठाजुले बुहारी मार्ने काट्ने काण्ड, सासु र नन्नले भाउजु जिउँदै जलाउने काण्ड, कहिलेसम्म जिबित राख्ने हाम्रो समाजमा ?
हामीले आजैदेखि सँस्कार, समनता र घमण्ड रहीत परिवर्तनको संकेत दिन थालौ हाम्रा सन्तानले त्येसको सिको गरुन र भोलिका दिनमा तपाईं हाम्रा सन्तानले, कुनै पनि छोरी बुहारीले घरायसी पिडाले बारबार मर्नु नपरोस् ।
Digital KhabarNepalNewsSaru BajgaiStory
चिनी मिल सञ्‍चालक कनौडियाले बुझाए १२ करोड
ट्रम्पको बिदाइ सम्बोधन: ‘हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु…